Lasoco wararkii ugu dambeeyey ee shir madexeedka IGAD iyo Muqdisho. – Radio Daljir
Lasoco wararkii ugu dambeeyey ee shir madexeedka IGAD iyo Muqdisho.
Seteembar 13, 2016 1:39 b 0
Muqdisho, Sep 13 2016–Madaxda waddamada xubnaha ka ah Urur Goboleedka IGAD ayaa laguu wadaa inay markii ugu horeysay ay magaalada Muqdisho ku qabtaan shir madaxeedkooda, tan iyo markiii ururkan la aasaasay 1986-kii.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheeegay in shir madaxeedka ajendaha looga doodii doono ay ka mid yihiin xasaradda ka aloosan Koonfuurta Suudaan, arrimaha diyaargarowga doorashada Soomaaliya iyo arrimaha la xiriira iskaashiga iyo wax wadaqabsiga waddamada IGAD xubnaha ka ah.
DHEGEYSO-Nabadoon Xarrago,*Dowladda Puntland waa inay dibu udejisaaa Itoobiyaanka Boosaaso*.
DHEEGYSO-Deegaamo katirsan gobolka Nugaal oo abaar laga soosheegayo.